Jobs Archives | NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ်
Vegas ထုတ်လုပ်မှု - Medic ကုမ္ပဏီစာရင်းသွင်းသူများသာသတ်မှတ်ထားသည် City, State Las Vegas, NV Duration 4/22 to 5/4 လစာ / နှုန်းအတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံပြီးအလုပ်အကိုင် 04/14/21 တွင်တင်ထားသောအလုပ်အကိုင် 04/21/21 ဖြင့်လျှောက်ထားသည်မဟုတ်ပါ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မျှဝေရန် Share on အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်း - Cam Op - Sound Op - ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုအသေးစိတ်: Las Vegas တွင် Covid လိုက်လျောညီထွေသောထုတ်လုပ်မှု၊ အဖြစ်မှန်ဇာတ်လမ်းများကိုရိုက်ကူးခြင်း ...
Craft Service Company ၏လျှို့ဝှက်မြို့တော်၊ ပြည်နယ်အတ္တလန်တာ၊ ဂျော်ဂျီယာ Duration 5/10 - ၅/၂၇ လစာ / နှုန်းဒေါ်လာ TBD / day ၀၄/၁၄/၂၁ တွင်တင်ထားသောအလုပ်အကိုင် 5/27/04 ဖြင့်လျှောက်ထားပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မပံ့ပိုးပါ။ တစ် ဦး Indie Feature ရုပ်ရှင်။ အရပျ၌ IA နိမ့်ဘတ်ဂျက်သဘောတူညီချက်။ ATL ဒေသခံသို့မဟုတ်ဒေသခံအဖြစ်သာအလုပ်လုပ်သည်၊ ခရီးသွားခြင်းနှင့်တည်းခိုခန်းမပေးရ။ ရာထူး - ဝတ်စုံဒီဇိုင်နာ၊ အေဒီ ၂ ခု ...
Gaffer ကုမ္ပဏီ၏လျှို့ဝှက်မြို့တော်၊ ပြည်နယ်အတ္တလန်တာ၊ ဂျော်ဂျီယာ Duration 5/10 - ၅/၂၇ လစာ / နှုန်းဒေါ်လာ TBD / day ၀၄/၁၄/၂၁ တွင်တင်ထားသောအလုပ်အကိုင် 5/27/04 ဖြင့်လျှောက်ထားပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မပံ့ပိုးပါ။ Indie ဇာတ်ကား။ အရပျ၌ IA နိမ့်ဘတ်ဂျက်သဘောတူညီချက်။ ATL ဒေသခံသို့မဟုတ်ဒေသခံအဖြစ်သာအလုပ်လုပ်သည်၊ ခရီးသွားခြင်းနှင့်တည်းခိုခန်းမပေးရ။ ရာထူး - ဝတ်စုံဒီဇိုင်နာ၊ အေဒီ ၂ ခု (ရုပ်ရှင် ...
Vegas ထုတ်လုပ်မှု - Camera Op ကုမ္ပဏီသာစာရင်းပေးသွင်းသူများမှာ City, State Las Vegas, NV Duration 4/22 to 5/4 လစာ / နှုန်းအတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံပြီးအလုပ်အကိုင် 04/14/21 တွင်တင်ထားသောအလုပ်အကိုင် 04/21/21 ဖြင့်လျှောက်ထားသည်မဟုတ်ပါ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မျှဝေရန် Share အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်း - Cam Op - Sound Op - ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုအသေးစိတ်: Las Vegas တွင် Covid လိုက်လျောညီထွေသောထုတ်လုပ်မှု၊ အဖြစ်မှန်ဇာတ်လမ်းများကိုရိုက်ကူးခြင်း ...
Hair Stylist ကုမ္ပဏီသာစာရင်းသွင်းထားသည့် City, State Los Angeles, CA Duration 4/22 and 4/23 လစာ / နှုန်း $ / တစ်နေ့လျှင်ဒေါ်လာ ၅၀၀/၁၄/၂၀၁၁ တွင်တင်ထားသောအလုပ်အကိုင် 500/04/14 ဖြင့်လျှောက်ထားပါ ၀ င်ခြင်းမရှိပါ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မရှိပါအလုပ်အကိုင်အကြောင်းဆံပင်ရှာခြင်းအလုပ်အကိုင်အကြောင်းမျှဝေပါ Stylist - LA - စီးပွားဖြစ် - Union Non-Shoot: iPhone App အတွက်အားကစား / ကြံ့ခိုင်မှုဆိုင်ရာမောင်းနှင်အားဖြင့်စီးပွားဖြစ်ရိုက်ကူးခြင်း။ နှုန်း: $ 21 / တစ်ရက် - 04 ရက်ရိုက်ကူးနေ့များ: Aprilပြီ 21, 21 တည်နေရာ: ...
Make Up Artist ကုမ္ပဏီသာစာရင်းသွင်းသူများသည် City, State Durham, Gaston ကောင်တီနှင့် Alamance ကောင်တီ, NC Duration TBC လစာ / နှုန်း TBD အလုပ် 04/14/21 တွင်တင်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်ဖော်ပြခြင်းမရှိပါအလုပ်အကိုင်မျှဝေခြင်းအလုပ်အကြောင်းမိတ်ကပ် ၀ တ်စုံ ၃ ခုအတွက်မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်ရှာနေသည်။ မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်၊ Durham၊ ဒေသဆိုင်ရာငှားရမ်းရမယ်။
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်မြို့တော်၊ ပြည်နယ်မိုင်ယာမီ၊ FL Duration 5/9 - 5/13 လစာ / နှုန်းမပေးရသေးသည့်အလုပ်များကို 04/14/21 တွင်တင်ထားသည် 05/08/21 ဖြင့်လျှောက်ထားပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဖော်ပြထားသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မျှဝေခြင်းအလုပ်အကိုင်အကြောင်းမိုင်ယာမီရှိ PAs များရှာဖွေခြင်း။ စမ်းသဘောနေ့စွဲများ:5/ 9-5 / 13) ။ စတူဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်၊ အဆင်ပြေစွာမောင်းနှင်မှုနှင့် covid protocols များကိုလိုက်နာရန်ကြိုးပမ်းနေသည့် rockstar ဖြစ်သင့်သည်။ ပိုမိုသိရှိရန်ယခုအဆင့်မြှင့်ပါ ...
အနုပညာဌာနကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်မြို့တော်၊ ပြည်နယ်အတ္တလန်တာ၊ ဂျော်ဂျီယာ Duration ၅/၁၀ - ၅/၂၇ လစာ / နှုန်းဒေါ်လာ TBD / day ၀၄/၁၄/၂၁ တွင်တင်ထားသောအလုပ်အကိုင် 5/10/5 ဖြင့်လျှောက်ထားပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မပံ့ပိုးပါ။ တစ် ဦး Indie Feature ရုပ်ရှင်။ အရပျ၌ IA နိမ့်ဘတ်ဂျက်သဘောတူညီချက်။ ATL ဒေသခံသို့မဟုတ်ဒေသခံအဖြစ်သာအလုပ်လုပ်သည်၊ ခရီးသွားခြင်းနှင့်တည်းခိုခန်းမပေးရ။ ရာထူးများ - အေဒီ ၂ ခု၊
1 ၏စာမျက်နှာ 2,34412345 » 102030...နောက်ဆုံး»